Khataraha ay leedahay galmada dabada | Raganimo University
Khataraha ay leedahay galmada dabada
Ma ogtahay in waxyaabaha ugu badan ee ragga Soomaalidu ay ka raadiyaan internet-ka ay ka midtahay galmada dabada? Taasi waxaan ku ogaanay baaritaan aan ku sameynay warbixin ay soo bandhigtay shirkada Google oo ku saabsan waxyaabaha dadka Somalia ku nool ay bogooda ka raadiyaan.
Sida aan wada ognahay galmada dabada waxay ka mid tahay waxyaabaha uu ilaahay mamnuucay. Wax kasta oo ilaahay imamnuucayna waxaa ka dambaysa sabab iyo khataro ay u leeyihiin dadka oo iyaga laga ilaalinayo. In haweenka looga galmoodo dabada waxay keeni kartaa dhibaatooyin dhowr ah.
Cudurada ayaa ku faafa
Sida ay sheegtay hay'ada Xakameynta Cururada ee Mareykanka, The Center for Disease Control and Prevention (CDC) Galmada dabada waxaa si fudud ugu faafa cudurada galmada ka dhasha sida HIV, cagaarshowga iwm ah. Sidaa daraadeed ayaa dadka qaniisiinta ah uu aad ugu badanyahay cudurka Aydhiska. Maadaama dabadu ay tahay meel ka wasaq-badan jirka intiisa kale oo ay ka buuxdo bakteriyo ayay ka fududahay in ay cuduradu ku faahfaan. Waxaa sidoo kale baaritaan lagu ogaaday in galmada dabadu ay siyaadiso khatarta cudurka kansarka.
Qofka oo saxarada ceshan waaya
Cilmi baaris la sameeyay sanadkii 2016 ayaa lagu ogaaday in qofka looga galmoodo dabada ay ka xumaato nidaanka saxarada oo uu dhaawac ka soo gaaro qaabka shaqada saxarada, iyadoo ay keeni karto in qofku uu saxarada ceshan waayo.
Dumarka ayaa aad ugu xunuunsada
Galmada dabada ayaa ah mid aad ugu xanuun badan dumarka. Xitaa dumarka gaaladu ma jecla galmada dabada. iyagoo ragooda u sheega in aysan dooneyn arintaan.